မှတ်ကျောက်၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
phyuthi သည်မှတ်ကျောက်ကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
မှတ်ကျောက် သည်Ven. Vunna's ၏ 'စုန်းပူး နတ်ပူးနှင့် လေ့လာမှတ်သားမိတာလေးများ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
မှတ်ကျောက် သည် Ven. Vunna's၏ 'စုန်းပူး နတ်ပူးနှင့် လေ့လာမှတ်သားမိတာလေးများ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"အ၇ှင်ဘုရား post ကို ကူးသွားပါတယ်ဘုရားfb မှာ အရှင်ဘုရားအမည်နှင့်တကွ share ခွင့်ပေးပါဘုရား အရှင်ဘုရား ရဲ့fb acc လေးလည်းသိခွင့်ရှိရင်သိပါရစေဘုရား"
KO KO သည် မှတ်ကျောက်'s၏ 'ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ .....'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
KO KO သည်မှတ်ကျောက်'s ၏ 'ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ .....' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ သည်မှတ်ကျောက်'s ၏ 'ဗုဒ္ဓအကြောင်းသိကောင်းစရာ ၂' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
မေ 27, 2013
မျိုးချစ်သူ သည် မှတ်ကျောက်'s၏ 'ဗုဒ္ဓအကြောင်းသိကောင်းစရာ ၂'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"copy to fb.thank you,"
Soe Gyi သည်မှတ်ကျောက်'s ၏ 'ဗုဒ္ဓအကြောင်းသိကောင်းစရာ ၂' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
aung aung soe သည် မှတ်ကျောက်'s၏ 'ဗုဒ္ဓအကြောင်းသိကောင်းစရာ ၂'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
မေ 26, 2013
Htain Lin Oo သည်မှတ်ကျောက်'s ၏ 'ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ .....' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Htain Lin Oo သည်မှတ်ကျောက်'s ၏ 'ဗုဒ္ဓအကြောင်းသိကောင်းစရာ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Htain Lin Oo သည်မှတ်ကျောက်'s ၏ 'ဗုဒ္ဓအကြောင်းသိကောင်းစရာ ၂' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဘုရားလောင်းမဖြစ်နိင်တဲ့ အဘဗ္ဗဌာန (၁၈) ပါး1.အမိဝမ်းတွင်းက မျက်စိကန်းလာတဲ့ သူ 2.အမိဝမ်းတွင်းက နားပင်လာတဲ့ သူ 3.ရူးသွပ်သောသူ4.စကားမပြောတတ်သူ5.ခြေလက်ဆွံ့သူ6.လူရိုင်း7.ကျွန်မ၀မ်းမှာ ပဋိသန္ဓေ8.နိယတမိစ္ဆာဒိဠိ9.လိင်မပြောင်းဘူး10.အနန္တ၇ိယကံငါးပါးမကျူးလွန်ဘူး11.နူသောသူမဖြစ်ဘူး12.တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သော်လည်း ငုံးအောက်ငယ်သော တိရစ္ဆာန်မဖြစ်13.ခုပိပါသိကပြိတ္တာ၊ နိဇ္ဈမတဏှိကပြိတ္တာ၊ ကာလကိဉ္စိကအသူရာမျိုးမဖြစ်နိုင်14.အ၀ီစိင၇ဲနှင့် လောကန္တရိကငရဲမှာမဖြစ်နိုင်15.ကာမာဝစရနတ်ဘုံမှာ မာန်နတ်မဖြစ်နိုင်16.ရူပဂါဝရဘုံမှာ အသညာသတ်ဗြဟ္မာနဲ့…See More
Kyi Maung သည် မှတ်ကျောက်'s၏ 'ဗုဒ္ဓအကြောင်းသိကောင်းစရာ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"အများဖတ်ရှုသိရှိစေရန် တင်ပြပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ ဖတ်ရှုမှတ်သားသွားပါသည်။"
မေ 21, 2013
zawmintun သည် မှတ်ကျောက်'s၏ 'ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ .....'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Soe Gyi သည်မှတ်ကျောက်'s ၏ 'ဗုဒ္ဓအကြောင်းသိကောင်းစရာ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒီဘလော့ကို မေ 26, 2013 တွင်6:26pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments3Likes
ဘုရားလောင်းမဖြစ်နိင်တဲ့ အဘဗ္ဗဌာန (၁၈) ပါး
1.အမိဝမ်းတွင်းက မျက်စိကန်းလာတဲ့ သူ
2.အမိဝမ်းတွင်းက နားပင်လာတဲ့ သူ
12.တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သော်လည်း ငုံးအောက်ငယ်သော တိရစ္ဆာန်မဖြစ်
13.ခုပိပါသိကပြိတ္တာ၊ နိဇ္ဈမတဏှိကပြိတ္တာ၊ ကာလကိဉ္စိကအသူရာမျိုးမဖြစ်နိုင်
ဒီဘလော့ကို မေ 18, 2013 တွင်7:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments4Likes
မိမိကိုယ်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ် ခံယူ ယူဆလျင် ဗုဒ္ဓအကြောင်းကို အတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်ထိ သိသင့်သည် ဟု ယူဆရပါသည်။ မည်သည့်ဘာသာတွင်မဆို သဒ္ဓါတရားသည် အခြေခံတရားဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်သည့်အလျောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေဖြင့် ယခု post ကို ဖတ်၇ှု့ပြီး သဒ္ဓါတရားများတိုးပွားစေရန် ရည်ရွယ်ကာ စေတနာအရင်းခံဖြင့် ရေးသားမျဝေလိုက်ပါသည်။
ဘုရားတစ်ဆူတစ်ဆူ ပွင့်ဖို့ဆိုသည်မှာ အင်မတန်မှ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ နိုင်လှပါသည်။ ထိုသို့ ကြုံခဲလှပုံကို ကြုံကြိုက်ခဲခြင်း ခြောက်ပါးအနေဖြင့် ရှင်တော်မြတ်စွာဘု၇ားမှ…
ဒီဘလော့ကို မေ 17, 2013 တွင်11:58pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments3Likes
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေဖြင့် ကြည့်မည်ဆိုပါက မကွယ်ဝှက်တမ်းဆိုရလျင် အခြားသောဘာသာဝင်များကို အယူလွဲသူများဟု ဆိုကဆိုနိုင်ပေသည်။
သို့ရာတွင် ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဘက်မှလည်း မိမိတက်နိုင်သမျှအချိန်ရသလောက် မိမိဘာသာအကြောင်းကို မည်မျှဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးနေပြီလဲ၊ တခြားဘာသာအကြောင်းကိုရော မည်ရွေ့ မည်မျှသိထားပြီလဲ၊ မိမိကရော ဒီနောင်တမရကြေးဆိုသော ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိနေသော ဘာသာေ၇ွး ချယ်မှု့အပေါ်ဘယ်အတိုင်းအတာလောက်ထိများပိုင်နိုင်စွာရွေးချယ်ထား…
ဗုဒ္ဒနှင့် သူ၏ ထူးအံ့ရာများ ( 1 )
ဒီဘလော့ကို ဇူလှိုင် 20, 2012 တွင်12:40pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
လက္ခဏာတော်ကြီး 32 ပါး
108 ကွက်သော စက်လက္ခဏာအစုံပါသော ခြဖ၀ါး
ဖွားစအခါကဲ့သို့ အမြဲနုနယ်သော လက်ခြေများ
ခြေသလုံး၏ ရှေ့နောက် နံပါးအသားစိုင်များမှာ သလေးစပါးနှင့်တူခြင်း
12:34pm အချိန်ဇွန် 22, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
4:02pm အချိန်အောက်တိုဘာ 7, 2012, တွင် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အတ္တဆိုတာ အားနည်းချက်ကို ဖုံးကွယ်ထားတဲ့
မျက်နှာဖုံးတစ်ခုပေါ့။... လောကကြီးမှာ အရှိတရားကို မျက်စိစုံမှိတ်
ဥပေက္ခာပြုရင်း သစ္စ၀ါဒကို သေဆုံးစေခဲ့သူတွေ ဒုနဲ့ဒေး...
ကမ္ဘာမြေပုံမှာ ငါတို့က အစက်အပြောက်လေး
တစ်ခုအဖြစ်နဲ့တောင် ပါဝင်ခွင့်မရခဲ့သူတွေ, ဒါနဲ့များ သူများအရေခွံတွေကို
ခွါချဖို့ ဘာကြောင့် တက်ကြွနေမိပါလိမ့်...။
ပါးစပ်နဲ့လူသတ်ရင်း အမြင့်မြတ်ဆုံးလို့ ဟစ်ကြွေးနေသူတွေ
ကရုဏာနဲ့စာနာမှု ဘယ်ဟာကို အထူးပြုထားလဲ? ရက်စက်ခြင်းနဲ့
ရင်တွင်းအာဃာတတွေကို စတေးဖို့ ဘာသာရေးကို အလေးပေးတာတဲ့....။
ခေါင်းခြေထောက်တွေ ပလူပျံနေတဲ့ ထမင်းဝိုင်းပေါ်က
အရှေ့အလယ်ပိုင်းပြဿနာကို တရုတ်ပြန် ပုဇွန်ပြာတွေက
အမောက်မပါတဲ့ ဧရာဝတီနဂါးရဲ့အပြုံးက အမုန်းရိပ်တွေ သန်းနေပြန်ရော....။
2:24pm အချိန်စက်တင်ဘာ 1, 2012, တွင် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
“ငါ၏တရားကို ပုဂ္ဂလိကကြည်ညိုမှုဖြင့် လက်မခံကြကုန်လင့်၊ ရွှေကို မီးဖြင့်စမ်းသက်သကဲ့သို့ ငါ၏တရားကိုလည်း စမ်းသက်ကြကုန်လော့”ဟု လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင့်ငါးရာကျော်က အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် မြတ်ဗုဒ္ဓမိန့်ကြားတော်မူခဲ့သည်။
“၀ိဘဇ္ဇ၀ါဒီ”ဟူသောခေါင်းစဉ်အောက်၌ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်များသည် ယနေ့ခေတ်အထိ ထွန်းတောက်ဆဲပင် ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တရားဟုသက်သေခိုင်လုံစေရန် စမ်းသက်မှုများကို လက်ခံနိုင်သည့်စွမ်းရည်သည် မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်တိုင်းတွင် တည်ရှိနေလေသည်။
ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ၀ါဒပြိုင်ပွဲပေါင်းများစွာကို မြတ်ဗုဒ္ဓထိတွေ့ခဲ့သည်။ သို့သော် အားလုံးသောပြဿနာများကို သဗ္ဗညုတရွှေဥာဏ်တော်ဖြင့် တည်ငြိမ်စွာပင် ဖြေရှင်းတော်မူခဲ့သည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သက်တမ်းတလျှောက် ဆဲရေးခြင်း..ပုတ်ခက်ခြင်း....ကျိန်ခြင်း....အထိတ်တလန့်ဖြစ်ခြင်း...၀မ်းနည်းခြင်းဟူသော ကိလေသာများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ တန်ခိုးရှင်တို့ကို ရည်ညွှန်း၍ ဆုတောင်းခဲ့ခြင်းမျိုးလည်း မရှိခဲ့ပေ။ လိုချင်တာ...ဖြစ်ချင်တာမှန်သမျှကို ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစဖြင့်ပင် ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်တော်မူခဲ့သည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓ လောကတွင် ပွင့်ထွန်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းမှာ သတ္တ၀ါတို့အား လူ,နတ်,ဗြဟ္မာချမ်းသာသုခများ ပေးစွမ်းရန်မဟုတ်ပေ။ သံသရာတည်းဟူသော ၀ဋ်ဆင်းရဲမှလွန်မြောက်ကာ နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော ကာမာသ၀,ဘ၀ါသ၀,ဒိဋ္ဌာသ၀,၀ိဇ္ဇာသ၀တို့၏ ကင်းဝေးရာနယ်မြေသို့ ပို့ဆောင်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်.... ထိုက်တန်သူများသာလျှင် အကျိုးကျေးဇူးကို ခံစားခဲ့ကြရသည်။
ငွေသန်းတစ်ရာရှိလျှင် ပတ္တမြားရနိုင်သည်၊ ငွေဆယ်သန်းရှိလျှင် စိန်ရနိုင်သည်။ ငွေဆယ်သိန်းရှိလျှင် ရွှေရနိုင်သည်။ ငွေတစ်သိန်းရှိလျှင် ဘော်ရနိုင်သည်။ ငွေတစ်သောင်းရှိလျှင် ကြေးရနိုင်သည်။ ငွေတစ်ထောင်ရှိလျှင် ကော်ရနိုင်သည်။...။ တန်ဖိုးရှိသောအရာများကို ပိုင်ဆိုင်လိုလျှင် တန်ဖိုးရှိသောအရာများကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလိမ့်မည်။ နည်းပါးသောပေးဆပ်မှုဖြင့် မြင့်မြတ်သောနေရာတို့ကို မရနိုင်ပေ။
နိဗ္ဗာန်သည် ကိုယ်ပိုင်အားထုတ်မှုသက်သက်ဖြင့် သွားရောက်ရသောနေရာမျိုးဖြစ်သည်။ ထက်သန်သော သဒ္ဓါတရား၊ ပြင်းထန်သော ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ စူးစိုက်တတ်သော ဥာဏ်၊ မှန်ကန်သောလမ်းစဉ်တို့သည် နိဗ္ဗာန်သွားလိုသူများအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်များပင် ဖြစ်ပါသည်။ (ကျောက်တောင်ကို တစ်ရှူးစဖြင့် နှစ်တစ်ထောင်ပွတ်တိုက်နေသော်လည်း ပြိုကျမည်မဟုတ်ပေ၊ သို့သော် ဒိုင်းနမိုင်းဖြင့်မူ တစ်ချက်တည်းဖြင့် အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ဖြစ်စေနိုင်ပေသည်၊ ဥာဏ်မပါသောဝီရိယသည် အချည်းနှီးသာဖြစ်သည်။) လှေစီးသူသည် မည်မျှပင် လှော်ခက်နေပါစေ၊ ဦးတည်ချက်မရှိလျှင် ပင်ပန်းရုံသာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် လမ်းမမှားဖို့ အရေးကြီးပေသည်။
အကျိုးတရား+အကြောင်းတရား မျှတစေရန်...။ ခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာ+စိတ်ပင်ပန်းအဆင်းရဲခံမှုဟူသော အစွန်းရောက်တရားတို့ကို မဇ္ဈိမပဋိပဒါ၊ ယောနိသောမနသိကာတို့ဖြင့် မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည့်အပြင်
”ယုံကြည်စရာ ယုံကြည်တာ သဒ္ဓါဖြစ်တော့သည်။
မယုံကြည်စရာ ယုံကြည်တာ အညာမိတော့သည်။”ဟု အနာဂတ်ဘ၀,သံသရာတို့တွင် ရွေးချယ်မှုမမှားစေရန်လည်း ဆုံးမတော်မူခဲ့သည်။
သဒ္ဓါလွန်ကဲ၊ ပညာနည်း၊ တလွဲ ယုံတတ်သည်။
ပညာလွန်ကဲ၊ သဒ္ဓါနည်း၊ စဉ်းလဲကောက်ကျစ်သည်...။ဟု မျှတမှုဖြင့် ရှုမြင်ကြရန်၊ ဆင်ခြင်တုန်းတရားဖြင့် တွေးခေါ်ကြံစကြရန်၊ ဓမ္မလမ်းကြောင်းမှ သွေဖယ်မသွားကြစေရန်တို့ကိုလည်း ညွှန်ကြားပြသတော်မူခဲ့သည်။
ပုဂ္ဂလဇ္ဈာသယ- သတ္တ၀ါတို့၏ အလိုဆန္ဒကိုသိခြင်းနှင့်
ဒေသနာဝိလာသ-စကားပြောကောင်းခြင်း အတတ်ပညာတို့ကိုလည်း လိမ္မာကျွမ်းကျင်တော်မူသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် အရှင်စူဠပန်-စသော ရဟန္တာမထေရ်မြတ်တို့ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ စိုက်ကပ်တော်မူနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာအားဖြင့်- သစ်ပင်တက်သူကို ရေကူးခိုင်းရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။)
3:51pm အချိန်သြဂုတ် 17, 2012, တွင် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် “ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက် ပိုကောင်းတယ်”ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း တို့ဘာသာဝင်တွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ တို့တတွေကူညီရမယ်။ ။ ။ ပြီးတော့ လူဆိုတာ သုံးဆယ်တစ်ဘုံမှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးပဲ..။ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်၊ ဘုရားအဖြစ် အပါအ၀င်ပေါ့...။ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံမှာ လူလောက်အင်အားကြီးတဲ့သတ္တ၀ါ လူ့ဘုံကလွဲပြီး တခြား ဘယ်ဘုံမှာမှမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်မို့ အားလုံး ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးတွေကို မြှင့်တင်ကြရမယ်။ ။ ။
2:59pm အချိန်သြဂုတ် 12, 2012, တွင် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အခုဆိုရင် လူသားတိုင်း ကမ္ဘာလောကရဲ့အပျက်တရားတွေကို ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။ တချို့ကလည်း 2012-ခုနှစ် ကမ္ဘာပျက်တော့မယ်တဲ့။ သေချာတာကတော့ လူတွေရဲ့လောဘ,ဒေါသတွေက လူသားတွေရဲ့အသက်ကို နှုတ်ယူမယ့်လက္ခဏာပဲ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေလည်း သေဆုံးလာတယ်။ နိုက်ကလပ်စ်တွေ,ကာရာအိုကေတွေနဲ့အတူ အနေအထိုင်လျော့ပါးတဲ့ လူနေမှုစနစ်တွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒုက္ခဘောင်ထဲ ဆွဲခေါ်သွားကြတယ်။
အမှတ်တမဲ့နေထိုင်နေကြတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုက တို့တတွေ သေဖို့အတွက် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတာကိုပဲ။ ။ ။
သုခတွေကို မောင်ပိုင်စီးမထားကြဖို့လိုတယ်။ ။ ။
“ကိုယ့်အတွက် အလှတရားဟာ အခြားသူအတွက် ဘ၀တစ်ခုစာဖြစ်မယ်ဆိုရင် စွန့်လွှတ်ရတာ တန်ပါတယ်။”